विचित्र संसार – nepaliSamachar.com नेपालीसमाचार
Homeअन्य थप >>विचित्र संसार
३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १३:१५ नेपाली समाचार 0
एजेन्सी । आजसम्म रुखमा फुल फुलेको देखिएको छ तर एउटा रुखमा महिला नै फल्ने गरेको भने पहिलो पल्ट सुनिएको हो । भारतको एउटा रुखमा महिलाको आकृतिको फुल फुल्छ । यसलाई देखेर सबै मानिस दंग परेका छन् । यो फुलको बनावट ठ्याक्कै महिलाको जस्तो हुन्छ । >>>
२८ श्रावण २०७७, बुधबार ०८:३४ नेपाली समाचार 0
एजेन्सी । अहिले विश्व कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्ध जुधिरहेको छ । विश्वका सबै देशको सरकार कोरोनालाई पराजित गर्न आफ्नो सबै शक्ति लगाइरहेको छ । यता विभिन्न देशका चर्चित व्यक्तिहरुले आफ्नो सरकारलाई कोरोनाविरुद्ध लड्न गरेको सहयोगका कारण चर्चा र प्रशंसा भइरहेको छ । अहिले एक वयस्क चलचित्र >>>
२७ श्रावण २०७७, मंगलवार १७:३९ नेपाली समाचार 0
एजेन्सी । अरेबियन महिलाहरुको छाला अन्य देशका महिलाहरुको तुलनामा धेरै सुन्दर र स्वस्थ्य हुन्छ । यी महिलाहरुको छाला मात्र हैन कपाल पनि उत्तिकै सुन्दर हुन्छ । सुन्दरताको कुरा गर्दा अरबेयिन महिलाहरुको प्रसंग जोड्ने गरिन्छ । हुनपनि बान्की मिलेको अनुहार, छालाको चमक, आँखाको तेज, मुलायम एंव >>>
जर्मनीमा हप्तौसम्म जुत्ता र चप्पलहरु हराए, अन्ततः स्यालले झाडीमा थुपारेको देखियो!
१७ श्रावण २०७७, शनिबार ०७:५७ नेपाली समाचार 0
एजेन्सी । जर्मनीको बर्लिनस्थित जेलेनडोर्फमा हतौंसम्म मानिसहरुका जुत्ता र चप्पलहरु हराए। जुत्ता र चप्पलहरु हराएपछि जेलेनडोर्फका मानिसहरुले आफ्ना सामानहरु चोरी भएको आशंका गरेका थिए। उनीहरुले प्रहरीमा पनि उजुरी दिए। तर अन्ततः चप्पल र जुत्ताहरु चोरी गर्ने मानिस नभएर स्याल भएको पुष्टि भयो। एक व्यक्तिले आफ्नो >>>
बागलुङमा शरीर जोडिएका पाडापाडी जन्मिए
१४ श्रावण २०७७, बुधबार ०५:५१ नेपाली समाचार 0
बागलुङ । प्रसव व्यथाले च्यापेको १२ घण्टापछि यहाँका एक किसानले पालेको भैँसीले शरीर जोडिएका पाडापाडी जन्माएको छ । गलकोट नगरपालिका–७ मल्मका भविन्द्रबहादुर थापाको भैँसी ब्याउन नसकेपछि मानिसले तानेर पाडापाडी निकालेका थिए । जन्मिँदा जीवितै रहे पनि केहीबेरमा पाडापाडी मरेको छिमेकी विष्णु थापाले बताउनुभयो । अघिल्लो >>>
११ श्रावण २०७७, आईतवार ०३:१८ नेपाली समाचार 0
एजेन्सी । श्रीमतीको १४ जनासँग अवैध सम्बन्ध भएको थाहा पाएपछि श्रीमानले प्रत्येक प्रेमीलाई कानुनी नोटिस पठाएर कूल १ सय करोड भारु (१ अर्ब ६० करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको मानहानीको दावी गरेका छन् । यो घटना कोलकाताको हो । पेशाले व्यापारी श्रीमानले यी पुरुषहरुका कारण आफ्नो >>>
२३ असार २०७७, मंगलवार ०६:०३ नेपाली समाचार 0
एजेन्सी । श्रीमान्लाई नराम्रो शब्द बोल्ने, हेपेर बोल्ने महिलाले कहिल्लै श्रीमानलाई प्रगती गर्न दिदैनन । श्रीमानहरु परिवारको लागि म र्न तयार हुन्छन । आफ्नो श्रीमानलाइ जतिबेला पनि नराम्रो सब्द बोल्ने ‘हेपेर’ बोल्ने ‘चिच्याएर’ बोल्ने महिलाले कहिल्लै पनि आफ्नो पुरुषको भलो हुन दिदैनन ! उक्तकुरा बिभिन्न >>>
३० चैत्र २०७६, आईतवार २२:११ नेसा संवाददाता 0
राम्रो स्वभाव भएका स्त्री भयो भने पतिको जिबन एकदम राम्रो हुन्छ । अनि त्यसै गरि राम्रो स्वभाव भएको पति भयो भने पनि स्त्रीको जिबन स्वोर्गीय हुन्छ । तर यी दुइ जना मध्ये एकजना नराम्रो भयो भने दुबैको जिबन नर्ग समान हुन्छ । कतिपय मानिसहरुको स्वभाव >>>
२२ माघ २०७६, बुधबार २०:५२ नेपाली समाचार 0
एजेन्सी । अधिकांश मानिसहरू दिनमा एकपटक भएपनि आफ्ना अगाडि नभएको मान्छेको कुरा काटिरहेका हुन्छन् । मानिसहरूमा प्रायजसो प्रशंसाका साथै कुरा काट्ने बानी हुन्छ । सोसियल साइकोलोजिकल एण्ड पर्सनालिटी साइन्समा प्रकाशित गरिएको जर्नलमा मान्छेले दिनमा करिब १ घण्टा अरुका कुरा काटेर बिताउने गरेको उल्लेख गरिएको छ >>>
२२ माघ २०७६, बुधबार २०:४९ नेपाली समाचार 0
एजेन्सी– यो दुनियाँ बढो अजिबको छ । कहिलेकाहीँ यस्ता घटनाहरु बाहिर आइरहेका हुन्छन्, जसले हामीलाई विश्वास गर्न पनि गाह्रो पारिदिन्छन् । एउटा यस्तै समाचार आएको छ, भारतको गुजरातबाट । त्यहाँ आफ्ना छोराछोरीको विवाहमा नै सम्धी र सम्धिनी एकअर्कासँग प्रेममा परेर भागेका छन् । यो समाचार >>>
२१ माघ २०७६, मंगलवार २३:१९ नेपाली समाचार 0
एजेन्सी । रिस, शोक, डर, चिन्ता र तनाव मानव जीवनका अनिवार्य हिस्सा हुन् । जोसुकै मानिसलाई पनि यी कुराहरु हुन्छन् । कसैले आफूलाई माथि लेखिएका कुराहरु मध्येका कुनै एक मात्रै हुँदैन भनेर भन्छ भने मान्नुहोस्, या त त्यो मानिस मुर्दा हो या त त्यो मानिस नभएर >>>
२१ माघ २०७६, मंगलवार २३:१७ नेपाली समाचार 0
एजेन्सी । बोटबिरुवाहरुमा एफिड्स (Aphids) नाम गरेको एकथरि कीरा पाइन्छ । यो कीरालाई विरुवाको जुम्रा पनि भन्ने गरिन्छ । किनभने, यो कीराले बोटबिरुवामा पौष्टिक पदार्थहरु पुर्‍याउने रस खाने गर्छ । त्यस्तो रस खाएर यसले आफ्नो शरीरको लागि आवश्यक पोषण लिने गर्छ । बढी भएको रस >>>
१४ माघ २०७६, मंगलवार २२:०५ नेसा संवाददाता 0
काठमाडौं। कहिलेकाहीँ श्रीमान–श्रीमतीको अगाडि यतो परिस्थिति आउँछ कि दुवैले केही गर्न सक्दैनन् । दुवैले एक अर्कालाई धोका दिएर बाहिर सम्बन्ध बनाएको अवस्थामा निकै संकट पर्न सक्छ । यस्तै एउटा घटना भारतको उत्तराखण्डको काशीपुरमा भएको छ । आज तकका अनुसार यहाँ एक व्यक्तिले कलगर्ल बोलाएका थिए >>>
२० पुष २०७६, आईतवार २२:५३ नेसा संवाददाता 0
गुल्मी, १० पुस । नेपाली समाजमा बलात्कार र हत्याका घटना एकपछि अर्को गरी आइरहेका बेला गुल्मीमा भने अनौठो घटना घटेको छ । एक ७२ वर्षीया वृद्धाको हत्याको घटना अनुसन्धान र छानविन गर्दै जाँदा ‘भैसी करणी’ को घटनामा जोडिन पुगेको छ । गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका–७ रुपाकोट >>>
८ पुष २०७६, मंगलवार १९:५७ नेपाली समाचार 0
एजेन्सी । प्रत्येक दिन संसारमा १ लाख जहाजहरू आफ्नो गन्तव्यमा उड्ने गर्छन् । छोटो दूरीदेखि लामो दूरीसम्म उड्ने जहाजमा लाखौँ यात्रीहरू यात्रा गरिरहेका हुन्छन । तपाईं रेगुलर जहाजको यात्री भएपनि तपाईंलाई जहाज उडानका बारेमा कतिपय कुराहरू थाहा नहुन सक्छ । यहाँ हामीले त्यस्ता ७ रोचक तथ्य >>>